३३ किलो सुन खै प्रधानमन्त्री ज्यु ? कहाँ गयो गोरे ? के हुँदै छ ? हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भाको हो ? - info4nepal
३३ किलो सुन कहाँ गयो ? के भयो? को ठुला को साना माछा खै के हुदैछ मुला नेताहो??
एक समय जतासुकै छाएको थियो – सुनकान्ड र गोरे । र अहिले त्यो एक्कासी सेलाएको छ । न त अहिलेसम्म सुन भेटियो न त त्यसमा संलग्न भनिएका ठुला माछा नै भेटिए ।
गोरे समातिएपछी जनताले सोचेका थिए ल अब यो सुन तस्कारको जालो तोडिनेछ र ठुला माछाहरु समातीनेछन् । यतिका समय बित्दा पनि केहि सुइँकोसम्म छैन ठुला माछाको । जनता भने हेरेको हेरै ।
त्यस्तै सिन्डिकेट अन्त्य हुन्छ भने जनताले कत्रो आश गरेका थिए । तर त्यो पनि बिस्तारै सेलायो । सडकमा हेर्यो यातायतको मनोमानी, गुन्डागर्दी जस्ताको त्यस्तै छ । अब कतै यो सिन्डिकेट अन्त्य हुन्छ भन्ने कथा मात्र हुने हो कि भन्ने डर छ ।
आखिर सधैँ किन यस्तो हुन्छ ? कुनै राम्रो काम शुरु त हुन्छ तर बिचमा घाम अस्ताएजस्तो सेलाएर जान्छ । यसमा नेताको दोश कि हाम्रो पनि । यदी हामीले नेतालाई बेला बेला दबाब दिए यस्तो हुँदैँन थियो कि !
अनि आर्को कुरा, अहिलेका सभामुख भनौदा ले आफैले आफुलाइ सुन तस्करको सानो माछा हु म, ठुला माछा धेरै छन भन्थे , के हुँदै छ?
आफुले आफैलाइ तस्कर भनेका यी नालायक किन अहिलेसम्म सभामुख छन? कुन मुख लिएर यी आज सम्म सभामुख भै रहेका छन ? यिनलाइ किन कारवाही नभाको?
सभामुख नै तस्कर भएपछी , सन्सद भवनमा के गतिलो कुराको आशा गर्ने जनताले ? कि आफ्नो पार्टीको हो भनेर बाल मतलभ नगरी बस्न खोजेका हुन प्रधानमन्त्री ले?
हिजो उत्तिकै गल्ती गरेका कानुन मन्तृको पद खोसियो , उनलाइ राजिनामा दिन लगाइयो तर दुर्गा प्रसाइलाइ आज सम्म केही गर्न सकेका छैनन । किन?
एउटा आदिवासिको छोरालाइ मात्र कानुन लाग्ने , प्रसाईं लाई चाहिँ नलाग्ने हो र ? येस्तो त संविधानमा लेखिएको छैन नि ।
कि उनले केपि ओलिलाइ मामा भनेका भएर भान्जालाइ कारवाही गर्न नमिल्ने हो?? कानुन त सबैलाइ बराबर हुनपर्ने हैन र???
अनि आफ्नो मान्छे भनेर होकि, कानुनले अनि हिजो सर्वोच्च अदालतले हत्यारा भनेका बालकृष्ण ढुङ्गेललाइ आम माफी भनेर छुटाइयो । के नाटक भैराको छ यो ??
छिटो भन्दा छिटो सुन कान्डको सबै तस्करलाइ कारवाही होस । आफू नै ठूलो माछा हुन भने प्रम ले राजिनामा दिनुपर्यो हैन भने दोशिलाइ कारवाही गर्नु पर्यो , अनि भान्जा भनौदा अस्पताल व्यापारी मेडिकल माफिया पैसा साउ मार्सी साउ सबै भनौदा बोल्ने सोमत नभएका दुर्गा प्रसाइलाइ पनि कारवाही गर्नुपर्यो।
सक्दो शेयर गरि सरकारलाइ दबाब दिउ।
धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनलाई चन्दा संकलनमा रोक ! (पुरा पढ्नुहोस्)
ranjan June 2, 2018
चर्चित फुटबल खेलाडी मेस्सिको जन्मदिन आज, हेर्नुहोस कति बर्स भए उनि
शेरबहादुर आउट ,अबकाे सभापति म हाे: शशांक कोइराला
ranjan November 2, 2018
नेताहरुको न कुनै व्यापार, न व्यवसाय तर केही बर्षमै हात्ती नै हात्ती भएको नोट बैंकमा कसरी आयो ?
दुखद खबर : रामेछापको हस्पिटलको आगो निभाउन गएका १४ सैनिक बिरगतिप्राप्त
ranjan August 2, 2018
ranjan November 21, 2018